UZAKARIYA 1 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
11Ke kaloku kwathi kwinyanga yesibhozo yonyaka wesibini wolawulo lukaDariyo, ilizwi *likaNdikhoyo lafikela *umshumayeli uZakariyaEzra 4:24 – 5:1; 6:14 unyana kaBherekiya unyana kaIdo.
2Lalisithi: “UNdikhoyo wayebaqumbele gqitha ooyihlo-mkhulu. 3Yithi ke kubo: Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: ‘Buyelani kum,’ nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo onamadla onke, ‘nam ke ndobuyela kuni,’ utsho uNdikhoyo onamandla onke. 4Sanukuhamba ekhondweni looyihlo-mkhulu, bona babexelelwa ngabashumayeli bamandulo besithi: Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: ‘Guqukani kwiindlela zenu zobubi, nahlukane nemisebenzi yobugwenxa. Kambe ke abazange bandiphulaphule, bengazange bandithobele,’ utsho uNdikhoyo. 5Ngoku ke baphi ooyihlo abo? Bona abashumayeli baphila ngonaphakade na? 6Kodwa ke, andithi amazwi am ngokunjalo nemimiselo yam endandiyithume izicaka zam abashumayeli yabafumana ooyihlo-mkhulu abo?
“Kaloku ke bazisola bathi: ‘Ngenene uNdikhoyo onamandla onke usiphethe ngokweendlela zethu; usivuze ngokwemisebenzi yethu, njengoko wayezimisele ukwenjenjalo.’ ”
7Ngomhla wamashumi amabini anesine kwinyanga yeshumi elinanye, nyanga leyo ekuthiwa nguShebhati, kwakuloo nyaka wesibini wolawulo lukaDariyo, ilizwi *likaNdikhoyo lamfikela *umshumayeli uZakariya unyana kaBherekiya unyana kaIdo.
8Ndasuka ndaba nombono ebusuku: Phambi kwam ndabona umfo ekhwele ihashe elibomvu.SiTyh 6:4 Wayemi engxingweni phakathi kwemithi yemetile. Emva kwakhe kwakukho amanye amahashe, abomvu, amfusa, namhlophe.SiTyh 6:2
9Ndaza ke ndathi: “Ithetha ntoni le nto, nkosi yam?”
Isithunywa eso ebesithetha nam sathi: “Ndiza kukubonisa intsingiselo yezi zinto.”
10Ke loo mfo umi phakathi kwemithi yemetile waphendula wathi: “Aba ngabathunywe nguNdikhoyo ukulityhutyha ihlabathi liphela.”
11Banika ingxelo kweso sithunywa sikaNdikhoyo siphakathi kwemithi yemetile, bathi: “Silityhutyhile ihlabathi lonke, saza salifumana lizole nzwanga.”
12Ke isithunywa sikaNdikhoyo sathi: “Ndikhoyo onamandla onke, koda kube nini ungenaluvelwano neJerusalem needolophu zakwaJuda owaziqumbelayo le minyaka ingamashumi asixhenxe?” 13UNdikhoyo ke wasiphendula ngamazwi obulali nentuthuzelo eso sithunywa sasithetha nam.
14Isithunywa eso ke esasithetha nam sathi: “Lubhengeze olu daba uthi: Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: ‘Ndinekhwele elikhulu ngeJerusalem neZiyon. 15Kambe ke ndiziqumbele kakhulu izizwe ezixhamla ulonwabo. Bendingaqumbanga kakhulu, kodwa zona zisuke zayongezelela inkxwaleko.’
16“Ngoko ke utsho uNdikhoyo ukuthi: ‘IJerusalem ndiza kuyivelela ngenceba, ibuye yakhiwe indlu yam khona,’ utsho uNdikhoyo onamandla onke. ‘Ewe, intambo yokulinganisa iza kolulwa phezu kweJerusalem.’ 17Phinda ubhengeze uthi: Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: ‘Iidolophu zam ziya kuphinda ziphuphume yinkqubela, iZiyon ndibuye ndiyithuthuzele mna Ndikhoyo, ndiyichonge iJerusalem.’ ”
18Ndathi ndakukhangela ndabona nazo iimpondo ezine phambi kwam. 19Ndabuza kweso sithunywa sasithetha nam ndathi: “Yintoni intsingiselo yazo?”
Saphendula sathi: “Ezi zezi mpondo zachitha-chitha uJuda noSirayeli neJerusalem.”
20Ke kaloku *uNdikhoyo wandibonisa iingcibi ezine, 21ndaza ke ndathi: “Ezi ngcibi zize kwenza ntoni na?”
Waphendula wathi: “Ezi mpondo ngabo bachitha-chitha uJuda kangangokuba kungabikho bani unokuphakamisa intloko yakhe. Kambe ke iingcibi ezi zize kubarhwaqelisa; ziza kuzaphula iimpondo izizwe ezalifaka uphondo ilizwe lakwaJuda, labachitha-chitha abemi balo.”